EditShare HPA2019 တွင် IMF ၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုပြသသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » EditShare HPA2019 မှာ IMF ကဆန်းသစ်တီထွင်တင်ဆက်ပေးတယ်
ဘော်စတွန်, MA - ဖေဖော်ဝါရီလ 7, 2019 - EditShare®, အသိဉာဏ် shared သိုလှောင်မှုအတွက်နည်းပညာခေါင်းဆောင်, QC နှင့်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်ယနေ့က၎င်း၏ automated အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြေရှင်းချက်တခုအဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်, ထို HPA Tech မှမှာ QScan နှင့်၎င်း၏ IMF ကစွမ်းရည်ဟာ JW Marriott ဟာဒီအမှုမပေါ်မှာဖေဖော်ဝါရီလ 11-15, 2019 ကနေတီထွင်ဆန်းသစ်မှုဇုန်ဆုတ်ခွာ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကန္တာရ Springs Resort & Spa ။
အဆိုပါဆုရ QUALES AQC အင်ဂျင်အားဖြင့် Powered, QScan ကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုဖြတ်ပြီးမီဒီယာပညာရှင်များများအတွက်စံပြ automated အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြေရှင်းချက် Post-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးအောင်, အလုပ်ငန်းအသွားအလာစဉ်အတွင်းမည်သည့်အချက်မှာလျှောက်ထားနိုင်သည့်ထူးခြားတဲ့ Single-Pass နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြစ်စဉ်ကိုလုပ်ကိုင်။ QScan ထိုကဲ့သို့သော IMF ကစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် AS-11 ရလာဒ်ကဒိအဖြစ် AQC တင်းပလိတ်များနှင့်အတူ Pre-loaded လာပါတယ်။ IMF က packages များအဘို့အထောကျပံ့ဖို့အပြင်, ရှိသမျှ QScan မော်ဒယ်များ PSE testing အတွက်ထောက်ခံမှုလည်းပါဝင်သည်သောပီပီနှင့် AMWA ထံမှလိုက်နာမှုလက်မှတ်သယ်။
ထုတ်လွှင့်နှင့်အွန်လိုင်းများအတွက် IMF က, အကြောင်းအရာကွင်းဆက်အလိုအလျောက် multiple ဗားရှင်း၏မလိုအပ်သောဖန်ဆင်းခြင်းဖယ်ရှားခြင်း, လုပ်ငန်းအသွားအလာထိရောက်စွာ enable နှင့်မူရင်းပိုင်ဆိုင်မှု၏အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းခြင်းအနေဖြင့် QC နှင့် archive ကိုသိုလှောင်မှုလိုအပ်ချက်များကိုလျှော့ချဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေကိုမှန်ကန်စေသည်။ EditShare'' s ကို QScan မာစတာ, ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းနှင့်တည်းဖြတ်, ကွဲပြားခြားနားသောဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်ဘောင်နှုန်း, ရှုထောင့်အချိုး, ဘာသာစကားနှင့်များစွာသောနေရာများမှနောက်ဆုံးတွင်ဖြန့်ဖြူးဘို့မျိုးစုံဖိုင် Format supporting, ခေတ်သစ် IMF က Workflows နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ ဒါဟာအလိုအလြောကျပေးပို့ချွေတာရေးအဆောက်အဦများအတွက်လိုက်နာမှုတစ်ခုကြီးမားငွေပမာဏကိုသေချာစေရန်သက်ဆိုင်ရာ XML ဖိုင်များကို၏တည်ရှိမှု (CPL, PKL, OPL, AssetMap, Volume ကိုညွှန်းကိန်း) ရဲ့ contents ဖတ်တစ်ခုလုံးကို IMF ကအထုပ် (IMPs) ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ပေးကို detect ဝင်ငွေလမ်းသစ်မှတံခါးများဖွင့်လှစ်စဉ်ကအချိန်။
IMF ကဖတ်ပြီးသား၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကျိုးခံစားခွင့်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် EditShare'' s ကို IMF က၏စီးပွားရေးအကျိုးကျေးဇူးများအပေါ် Howard ကြိုးရဲ့စက္ကူ, အပီပီမှာအတူပူးတွဲတီထွင် qscan.editshare.com/technical/imf-delivery
QScan အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး qscan.editshare.com.
AQC ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ EditShare ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor HPA hpa2019 IMF က IMF ကတီထွင်ဆန်းသစ်မှု IMF ကစမ်းသပ်ခြင်း မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု QC QScan quales လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-02-07
ယခင်: Jr ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ / ထုတ်လုပ်ခြင်းအဆိုတော်
နောက်တစ်ခု: ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ / ထုတ်လုပ်ခြင်းအဆိုတော်